Sybeth Musengezi Celebrates Birthday - Gambakwe Media
Home People Sybeth Musengezi Celebrates Birthday
Sybeth Musengezi Celebrates Birthday
ZANU PF activist Sybeth Musengezi is celebrating his birthday today.
Musengezi is a Zimbabwean political activist and member of Zanu-PF popular for filing a High Court application seeking the removal of President Emmerson Mnangagwa from the position of Zanu-PF secretary.
Responding to Musengezi’s High Court application, Obert Mpofu said Emmerson Mnangagwa was not liable to civil or criminal proceedings while he was still in office and the court challenge seeking to annul his ascendency to ZANU PF’s top post in November 2017 was flawed.
Musengezi was secretary for business development and liaison, Muzinda WaMugabe district, Zone 4, Harare province before the November 2017 coup. In an interview with VOA Zimbabwe Service, Musengezi dismissed George Charamba’s remarks that he was not a Zanu-PF member saying, “I joined Zanu PF at a very tender age and I’m still in the party.”
Previous articleGift Ostallos to participate in the Obama Foundation Leaders program
Next articleTemba Mliswa partners with Norton artists to fight drug abuse